Kemerovo State University - Waxbarashada Sare ee Russia
gaabinta : hassock
Ha iloobin in aad wada hadlaan Kemerovo State University
Qor at Kemerovo State University
Waqtigan xaadirka ah Kemerovo State University (hassock) – mid ka mid ah jaamacadaha ugu weyn ee West Siberia, xubin ka mid ah Ururka Eurasian ee Jaamacadaha – waxay bixisaa trainig khubarada aqoon sare le in tiro balaadhan oo ah beeraha.
Haddaba KemSU oo laamihiisiina waxay bixisaa: 20 Barnaamijyada Master ee, 33 Barnaamijyada Bachelor ee, 37 taqasusyo, 6 gaarka ah ee waxbarashada xirfad sare.
qalin KemSU ka shaqeeyaan dugsiyada, kulliyadaha, machadyada, xarumaha cilmi-baarista sayniska, fulinta sharciga iyo hay'adaha garsoorka, qaybta ganacsi, bangiyada, iyo keentay laamaha dhaqaale ee labada gobol iyo Russia.
adag University ayaa waxaa ka mid ah 5 laamaha magaalooyinka: Anzhero-Sudzhensk, Belovo, Novokuznetsk, Prokopievsk, Yurga.
Madaxa Jaamacadda ka mid ah 12 Caqlina:
Kulliyadda Cilmiga Siyaasadda iyo Sociology,
Kulliyadda Xiriirka Taariikhda iyo International,
Kuliyada Philology iyo Journalism,
Kuliyada Romance iyo Germanic Philology,
Kulliyadda Tababarka jirka iyo isboortiga,
tayada wanaagsan ee tababarka ku salaysan yahay kaabayaasha up-to-date iyo shaqaalaha tacliinta iyo cilmiga, oo ay ku jiraan in ka badan 130 Dhakhaatiirta of Science iyo Professor, ka badan 600 Musharaxiinta of Science iyo kaaliyaha Professor, 15 Shaqaalaha Honoured dhinacyo kala duwan oo hawlaha.
KemSU The sameeyaa cilmi baaris aasaasi ah oo codsatay in beeraha kala duwan ee sayniska, warshadaha, dhaqaalaha qaranka iyo dugsiga sare. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira 30 dugsiyada sayniska sumcad, 12 beeraha sayniska waaweyn Jaamacadda. In looxyada hirgelinta Barnaamijka of formation of KemSU dhexdhexaad ah innovational (2010-2012) University Sayniska Complex ee Cusub oo la abuuray, waxaa la furay: laba qalabka sayniska xarumaha caadi isticmaalka, hagitaanada dhalinyarada ganacsiga «farmagaadho», Xarunta Horumarinta Competencies Cusub. In ka badan 30 waxyaabaha hantida aqooneed ee la diiwaan geliyey. Sida of September 2011, 17 shirkadaha yaryar cusub la furay.
Yearly ku KemSU oo laamaheediina heysta 20-25 shirarka scientifc, oo ay ku jiraan ugu yaraan 10 – oo ka mid ah dhammaan heerarka-Ruush iyo kuwa caalamiga ah.
ku saabsan Yearly 4000 cilmi KemSU’ publications sayniska (Wargeysyada iyo abstracts) muuqan, iyo sidoo kale ku saabsan 250 items buugaagta, monographs, uruuriyaa, buugaagta waxbarashada iyo buugagan.
The soo saaray at KemSU ah «Bulletin of University Kemerovo Gobolka» tan iyo October 2010 ayaa lagu soo daray liiska of «keentay joornaalada faca-dib loo eego iyo arimaha, oo waa in ay u daabacaan natiijadii cilmi weyn ee PhD-shaqeeya darajo tacliimeed ee Doctor iyo Musharaxa of Science »Guddiga Ogeysiin Sare.
Mid ka mid ah ugu weyn ee jaamacadda gobolka Maktabadaha cilmiga ah waxaa ku jira ku saabsan 1 milyan oo waraaqaha ku qoran luqado Ruush iyo dibadda. Its stock badan waxaa ka mid ah waxbarashada, suugaanta sayniska, sheekooyin iyo xilliyeedyada, iyo sidoo kale koob dhif iyo ururinta buugaagta by saynisyahano si fiican u yaqaan.
Kemerovo State University ayaa ka mid ahaa kii ugu horeeyay ee Russia si ay u abuuraan iyo horumarinta kaabayaasha macluumaad gobolka waxbarashada iyo sayniska. kaabayaasha University ayaa waxaa ka mid ah network computer-xawaaraha sare ka dhisay on salka of the Center of Information Technologies New. In 2008 Xarunta Macluumaadka la furay, taas oo ku qalabeysan yahay adag- iyo software ka saarayaasha dunida sare iyo kulmay dhammaan shuruudaha ku qeexan xarumaha processing xogta iyo kaydinta casriga ah ee Internet-ka. The zone Wi-Fi waa shaqeeya ee dhismaha Jaamacadda.
Waxaa jira in ka badan 40 shaleemoyinka multimedia in ay bixiyaan fasallo la adeegsiga tiknolojiyada cusub macluumaad ku KemSU ah (Jaamacadda madaxa). The qalabka kor-to-date waxaa laga codsadaa Vocaroo iyo telebridges, baahinta live sida albaabbada University gudahood, sidaas ururada iyo hay'adaha ku Russia iyo dibadda.
The Post-graduate on 40 gaarka ah iyo koorsooyin phD on 7 u gaarka ah waxaa u shaqeeya ee KemSU ah. Waxaa jira 7 PhD-Golayaasha on difaaca theses Doctor iyo Musharax ee Jaamacadda, oo ayan ku jirin – 5 Golayaasha wadajir on salka ururada kale ee waxbarashada iyo sayniska.
Sannad kasta University ballaarto iskaashi iyo ganacsiga xiriirka caalamiga ah. Waxaa jira 32 qandaraasyada in xoog la jaamacadaha iyo ururada ka soo Germany, France, Belgium, USA, Turkey, Finland, PRC, Mongolia, CIS iyo dalalka kale. Ardayda iyo macalimiinta waxay leeyihiin fursad ay ku bartaan oo ka shaqeeyaan probation at-sharafta sare jaamacadaha shisheeye. In ay markeeda University sannad walba joogtada u qaataan martida dibadda uga probation, qudbadeynta, haysta ee siminaaro.
sarrifka joogtada ah ee ardayda waxaa la isku raacay in la Marie walin University Free ah (Brussels, Belgium), University College ee Lessius (Antwerp, Belgium), Dugsiga Caalamiga ah Higher Ganacsiga iyo Horumarinta (EICD3A) (Lyon, France), iwm.
Yearly on gudbin ka Wasaaradda RF of Education iyo Science Jaamacadda ayaa qirtay ardayda ka yimaada wadamada CIS. Ugu ku saabsan joogo 50 muwaadiniinta oo ka mid ah wadamada CIS barto kulliyadaha kala duwan ee KemSU ee tacliinta sare.
Waayo, helitaanka wanaagsan in waxbarashada ganacsi oo tayo sare leh Business University ee Dugsiga waxaa la furay ardayda iyo wakiillo ka socda bulshada ganacsiga ee gobolka.
The Center of Languages ​​Learning Dibadda u shaqeeya ee KemSU bixinaya koorsooyin ku saabsan barashada Ingiriisiga, Jarmal, Faransiiska, Czech, Holland, Carabi, Talyaani, Chinese ee dhammaan kagama.
Xarunta Gobolka ee Professional Training Advanced iyo Islasocodka The laanta Inter bixisaa tababar iyo koorsooyin tababar horay on tiro balaadhan oo ah beeraha la sii daayo dukumentiyada gobolka-aqoonsan.
Kemerovo State University waa saldhiga waxbarashada fulinta barnaamijka Madaxweynaha tababarka maareynta ururada in dhaqaalaha qaranka ee Ruushka.
Nidaamka hawlaha waxbarashada sii wadaan si guul ah. On joogto ah KemSU ee la shaqeeyaa 89 hay'adaha waxbarashada guud ee Kuzbass ah. The macalimiinta Jaamacadda bixiyaan koorsooyin gaar ah iyo koorsooyin maadooyinka wanaajiyey waxbarasho loogu tala galay ardayda dugsiga. Waayo, caruurta hibada leh ee Xarunta Tababarka Pre-jaamacad qabanqaabiyaan shirar, olympiads, sannad walba ka haya dugsiyada guga iyo xagaaga qayb ka mid ah cilmibaadhe oo keentay University. Wada leh maamulka gobolka ee, Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee gobolka Kemerovo ah, University ayaa aasaasay Center Gobolka for Work Carruurta hibada iyo ururka aan dawliga ahayn «Golaha of Stars». xubnaha Its waa Codsedeyaalka dugsiga – Kooxda ku guuleysatay iyo kaalinta-up of dhan-Ruush olympiads iyo gobolka on maadooyinka kala duwan.
Jaamacadda waxaa hirgalinta mashruuca bulshada ee «My jaamacadda - qoyskeyga» diiradda ku wareegsan oo dhammu-horumarinta ardayda’ shaqsi. In ka badan 30 ururada shaqayn Jaamacadda: tiyaatarka istuudiyaha «Vstrecha», group cayaartii «Vtoraya Parallelnaya», kooxda reer Club oo ka mid ah Funny iyo Inventive, Heesa ee Academic, istuudiyaha «Art-Vocal», iwm.
The ciidaha ardayda’ abuurka «First Snow» iyo «Spring Student» qaadan meel sanad walba.
Waxaa jira xarumo inay galaan tababar ciyaaraha jidhka iyo isboortiga. The ciyaaraha iyo taam adag waxaa ka mid ah 3 jimcsado, hoydaan skiing a, kooxda dalxiis, profilatikada sanatorium ah «Vita», kala duwan oo rasaas ah, kooxda chess ah, iwm. Waxaa jira qaybaha isboortiga ee basketball, laliska, minifootball, ciyaaraha fudud track-iyo-field, powerlifting, aerobics taam, iwm.
Works mid ah kooxaha cilmi KemSU waxaa la siiyay saddex RF Dowladda Abaal waxbarashada. In 2007 Jaamacadda ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah «Yurub Tayada» – dadaalkooda si ay u gaaraan tayada sare ee adeegyada ay waxbarasho waafaqsan heerarka Yurub. In 2009 University la soo bandhigay la Certificate Tayada iyo Huuradu Sharafta.
KemSU ayaa heysta jagooyinka xoog dhexe ee ratings kala duwan. Sida laga soo xigtay xogta ka madax banaan hay'adda «RateOR» in 2009 Jaamacadda biiray madaxda sare ee 50 hay'adaha Ruush tacliinta sare on citedness ee publications cilmiyeed fiican (index Hirsch ah), in rating ee hawlaha sayniska iyo daabacaadda ee hay'adaha Ruush tacliinta sare muddo ka hor 2010 way qabsadeen 87 ka mid ah meel 500 hay'adaha ugu fiican ee Russia. In rating qaranka ee hay'adaha Ruush tacliinta sare ee sanad-dhamaadka 2010 KemSU soo qaaday 53-56 meel (ka mid ah 104 hay'adaha fiican Ruush).
Department of Kuliyada Biology (CF)
Department of cilmi barasho dhir
Department of cilmi barasho xayawaan iyo Ecology
Wasaaraddu waxay jirka aadanaha iyo ammaanka nolosha
Cilmi dhul iyo Waaxda Juqraafiga
Department of Mathematics Kulliyadda (Ji)
Department of Applied Xisaabta
Guddoomiyaha UNESCO ee Information Technology barashada Kombiyuutarka
Waaxda Xisaabta Fundamental
Department of awood bulshada iyo cilmi nafsiga (SPF)
Department of Psychology Social iyo nafsaani Technologies
Department of Psychology Guud iyo Psychology Developmental
Department of Work Social iyo maamulka bulshada
Department of Psychology Waxbarashada
Department of Kuliyada Chemistry (HF)
Department of Analytical iyo Chemistry imanba
Department of Organic iyo Chemistry Physical
Department of Solid Chemistry State iyo Chemical Qalabka
Departments of Kuliyada Relations History iyo International (FIiMO)
Department of Qadiimiga
Department of taariikhda ilbaxnimada iyo dhaqan-bulsheed isgaarsiinta
Department of Modern, Contemporary Taariikhda iyo Xiriirka Caalamiga ah
Wasaaraddu waxay taariikhda qaranka
taariikhda Major Ruush dhawaan
Department of Aragtida dhaqaalaha iyo maamulka
Departments of Kuliyada Romance iyo Germanic Philology (FRGF)
The Department of Translation iyo Luuqadaha
Department of Faransiis Philology
Departments of Kuliyada Cilmiga Siyaasadda iyo Sociology (FPNiS)
Department of Physics Kulliyadda (FF)
Department of Physics Guud
Department of Physics teori
Department of tijaabooyin Physics
Departments of Kuliyada Philology iyo Journalism (FFiZh)
Department of Language Ruush
Department of History iyo Aragtida of suugaanta iyo cayaaraha hiddaha
kursi ee stylistics iyo cod karsanaa
The Department of Journalism iyo suugaanta Ruush ee qarnigii labaatanaad
Departments of Kuliyadda Waxbarashada Jirka iyo Sport (FFiS)
Department of aasaaska teori dhaqanka jirka
Department of aasaaska Biomedical ee waxbarashada jirdhiska iyo cilmiga cayaaraha
Department of Kuliyada Dhaqaalaha (FE)
Waaxda Maaliyadda iyo Credit
Department of General iyo dhaqaalaha gobolka
Department of Management magacaabay I.P.Povaricha
Department of Aragtida Dhaqaalaha, Taxation, Ganacsiga iyo Sharciga
Department of Kulliyadda Law ah (LF)
Department of State iyo Sharci Maamuleed
Waaxda Sharciga Madaniga ah
Department of Aragtida iyo History of State iyo Sharciga
Department of Law Dambiyada iyo Criminology
Department of Habka Dambiyada iyo Criminalistics
waaxda ee shaqada, sharciga deegaanka iyo dhaaranay
Department of falsafada
Ma rabtaa wada hadlaan Kemerovo State University ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Kemerovo State University rasmiga ah Facebook
dib u eegista Kemerovo State University
Ku biir si ay ugala hadlaan of Kemerovo State University.